Mpaka sary Breziliana mirakitra ny hakanton’ireo mponina favela · Global Voices teny Malagasy
Mampiseho mponina Belo Horizonte ny asan'i Rafael Freire, mpakasary nampiana-tena
Nandika (en) i Edgar Velozo
Voadika ny 09 Mey 2022 5:22 GMT
Iray amin'ireo fakana sary voalohany nataon'i Rafael tao amin'ny zaridaina akaikin'ny vondrom-piarahamonina misy azy sy ny lohaheviny, ao Belo Horizonte, atsimo atsinanan'i Brezila | Sary: Rafael Freire/Nahazoana alalana
Nanokana ny fotoanany i Rafael Freire, 28 taona, mpaka sary hanehoana ny fiainana sy ny hakanton'ireo izay miaina manodidina azy ao amin'ny vondrom-piarahamonina antsoina hoe Aglomerado da Serra, ao Belo Horizonte, fanjakan'i Minas Gerais any atsimo atsinanan'i Brezila, ahitana fanavakavaham-bolonkoditra, endrika mainty hoditra, razambe, ary tsy fahitana fiarahamonina imaso eo amin'ny tokotanin-tsehatry ny sary nalainy.
Teraka ary niaina ny fiainany manontolo tao amin'ny faritra i Freire, ary tsy mikasa ny hiala ao izy. Avy aminy sy ireo maodely ireo tantara, izay hita amin'ny sary sy horonantsary navoaka tao amin'ny tambajotra sosialin'ilay mpaka sary.
“Tsy ahy izany, sady tsy momba ahy, fa ataoko ho an'ny olon-kafa,” hoy ny nasongadiny.
Ny zo hanonofy
Ampahany amin'ny tetikasa ‘Natureza Nua’ (Natiora miboridana) | Sary: Rafael Freire/Nahazoana alalana
Taorian'ny fisarahan'ny ray aman-dreniny, nanomboka “niambina fiara” i Freire, araka ny teniny, asa an-tselika any amin'ny faritra maro any Brezila sy Amerika Latina. Niambina ny fiaran’ny olona “eo ampitan’ny havoanan’ny favela (serra)” izy, faritra honenan’ny sarangan’olona antonony.
Iray amin'ireo faritra favela lehibe indrindra any Amerika Latina ny Aglomerado da Serra. Any amin'ny faritra atsimon'ny tanàndehiben'i Belo Horizonte (BH), olona miisa 50.000 no mivezivezy miaka-midina ny havoana, isan'andro — manana mponina eo amin'ny 2,5 tapitrisa eo ho eo i BH.
“Eo afovoany indrindra ny tranoko. Raha mijery avy eny ambony ianao dia mahita fa mamorona sary mitovitovy amin'ny voninkazo ny arabe,” hoy i Freire.
Teo amin’ny faha-18 taonany i Freire no nahazo asa tao amin’ny toeram-pivarotana fanontam-pirinty tao anatin'ny vondrom-piarahamonina.
“Inona no nofinofinao?” hoy ny iray tamin’ireo mpiara-miasa taminy nanontany azy.
“Tadidiko fa namaly aho hoe tsy fantatro. Teraka isika, lehibe, miteraka, ary maty. Ary miasa isika. Tsy manan-jo hanonofy aho. Tsy fantatro fa ho vitako izany, Hoy aho hoe ‘ tsy te ho tonga na inona na inona aho, tsy te hitombo intsony aho.”
Nisisika ilay mpiara-miasa aminy. Nambaran'i Freire tamin'ny farany fa tia manoratra izy ary maka sary izy indraindray. Tsaroany ny fitantarany ny fanamaivanana tsapany rehefa maka sary, nampiasa ny finday nananany tamin’izany fotoana izany.
“Nilaza [ny mpiara-miasa amiko] fa afaka mampiasa vola amin'izany aho ary ho lasa mpaka sary,” hoy izy nahatsiaro.
Nanampy azy hividy ny fakan-tsariny voalohany ity mpiara-miasa ity avy eo — matihanina amin'ny ampahany izay nandoavany vola isam-bolana vitsivitsy vao voaefa.
“Nanangom-bola ho an'ny mariaziny izy ary nanapa-kevitra ny hampindrana vola ahy hividianana ny fakan-tsary. Nifanaraka am-pirahalahiana izahay ary notohizako ny nofinofiko.”
Nalaina tao amin'ny zaridaina Mangabeiras Municipal Park ny sary voalohany, tao Belo Horizonte ihany koa. Isa-maraina, nitondra ny fakan-tsariny sy ny sakafony i Freire. Ny tolakandro ihany izy vao niverina, nandany ora maro nianarana ilay fitaovana sy nahita ny fomba niantefan’ny hazavana tamin’ny hazo sy ny zavamaniry ary ny hodiny tamin’ny fomba samihafa.
Niteraka ny tetikasany voalohany ity fizàrana asa ity: andian-tsarin-tenany. Namoaka ireo sary tao amin'ny tambajotra sosialy i Freire, Orkut, tamin'izany fotoana izany ary niafara tamin’ny fankasitrahan'ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpiara-mianatra taminy azy.
“Nanomboka notadiavina aho haka ny sarin'ireo olona hafa tao amin'ny vondrom-piarahamonina. Nanome ahy fahatokisan-tena hanao ny tetikasako voalohany miaraka amin'ny olon-kafa amin'ny anarako izany,” hoy izy.
Tamin’izany no nipoitra ny “Natureza Nua” (Natiora Miboridana): sarim-batana miboridana anaty natiora. Nanakoako tao an-tanànany ity tetikasa ity, indrindra noho ny fahasamihafan'ny vatana nasehon'i Freire.
“Tsy manome lanja be loatra ny ara-nofo, tsy miresaka ny vatana ho toy ny zavatra,” hoy ilay mpaka sary nanamafy.
Nahazo ny diplaoma tamin'ny lisea ihany i Freire. Fotoana fohy taorian'izay, nanomboka niasa tao amin'ny sekolim-panjakana iray teo an-toerana izy nampianatra sary ny ankizy.
Nasongadiny fa nanokatra ny masony hahita ny maha-zava-dehibe ny fanehoana an-tsary sy ny fomba mahatonga izany ho anisan'ny asany maka sary ihany koa ny fianarany tany an-tsekoly.
“Tsapako fa hampianatra amin'ny sekoly ahitana mpianatra mainty hoditra amin’ny 90 isan-jato aho. Navelako haniry ny voloko nandritra io vanim-potoana io. Nanomboka nanao fianarana fanampiny koa aho, indrindra fa momba ny hatsaran-tarehin’ny mainty hoditra,” hoy i Freire.
Na izany aza, tamin'ny tapaky ny taona 2015, tsy afa-nikofoka ny sekoly taoriana kelin'ny nanombohany nampianatra. Tsy nisy afaka nivoaka teny an-dalambe, ary tsy nisy zavatra nisokatra. “Nifandona ny ankolafy roa. Tsy hitako izay hatao amin’ireo ankizy.
Nanapa-kevitra ny haka sary ny zavatra hitany i Freire noho izany. Nanomboka tamin'io vanim-potoana io ny tetikasa “Construindo a Paz: versos em imagens” (Fananganana Filaminana: Andininy Amin'ny Sary) — izay namoronan'ireo mpianany, ankizy manodidina ny 10 taona, tononkalo ho an'ireo sary.
“Tao amin'ny iray amin'ireo tononkalo, nieritreritra zava-misy iray ny mpianatra iray: tsy misy voninkazo ao amin'ny favela. Tsy mbola nahatsikaritra an'izany aho ary tena marina ny azy,” hoy i Freire, nanasongadina izany tsy fanjavozavoana izany satria manondro karazana voninkazo ihany koa ny teny hoe favela.
Io fisaintsainana io no nahatonga ny andian-tantarany farany indrindra, “Favela Flor que se Aglomera” (Voninkazo Favela Mitambatra). “Tsy mbola manana fampiantranoina ity tetikasa ity, fa mbola hanana izy indray andro any”, hoy izy momba ny tetikasa izay mbola tsy nahitana toerana hampirantiana izany.
Amin'izao fotoana izao, mivelona amin'ny fandraisana anjara isam-bolana avy amin'ireo izay manohana ny asany i Freire, amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola iombonana. Ankoatra izay, manana ny karamany amin’ny maha mpampianatra azy koa izy.
Manonofinofy hanokatra toeram-piasana ao amin'ny Aglomerado da Serra ilay mpaka sary mba hampiasana ny mponina ho maodely ary ahafahana mizara amin'izy ireo ampahany amin'ny tombony avy amin'ny sariny. Efa natao lohahevitra maodely ho azy ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina, saingy mbola tsy afaka mandoa vola ho azy ireo izy amin'izany. Nilaza i Freire fa manasa ny olona tsirairay izy rehefa mahita hevitra momba ny sariny.
“Tsy te ho toy mpaka sary manana sary tsara tarehy fotsiny aho, te hanova ny fiainan'ny hafa aho. Raha tsy izany dia tsy misy dikany ny maha mpaka sary ahy,” hoy izy.
Sary: Rafael Freire